Alshabaab ” Waxaan baraawe ku dilnay 15 askari 3 gaari waan gubnay magaalada qeybo kamid ah ayaan la wareegnay” – Kismaayo24 News Agency
Alshabaab ” Waxaan baraawe ku dilnay 15 askari 3 gaari waan gubnay magaalada qeybo kamid ah ayaan la wareegnay”
by Tifaftiraha K24 23rd March 2017 040
Faah faahin dheeraad ah ayaa waxa ay ka soo baxayaan dagaalkii xalay ka dhacay dagmada baraawe ee gobolka shabeelada hoose kaasi oo dhexmaray ciidamada dowladda iyo xoogag alshabaab ka tirsan.
Xoogaga alshabaab ayaa dhowr jiho ka soo weeraray magaalada waxaana ay weeraro ku ekeeyeen saldhigyo ay ciidamada dowladda ku leeyihiin magaalada baraawe.
Dagaalamayaasha alshabaab waxa ay ka soo galeen dhinaca xeebta iyadoona ay dagaal culus ku bilaabeen sladhigga ciidamada dowladda iyo guriga guddoomiyaha dagmada baraawe.
Alshabaab waxa ay sheegeen in ciidankooda ay u suurta gashay in ay la wareegaan gebi ahaan difaacyadii ciidanka ay kaga jireen magaalada waxaana shabaab ay sheegeen in ciidanka ay isugu geeyeen saldhigga degmada waa sida ay shabaab sheegatay .
Qasaaraha ka dhashay dagaalka oo aan si dhab ah loo ogeyn ayey shabaab waxa ay sheegteen in ay dileen 15 askari oo ciidanka dowladda kamid ah halka ay dhaawaceen askar intaas ka badan sidoo kale shabaab waxa ay sheegteen in ay gubeen 3 gaari oo nooca dagaalka ah.
Dhinaca kale saraakiisha dowladda ayaa dhankooda waxa ay sheegeen in ay iska caabiyaan dagaalyahanadii weerarka kusoo qaabay magaalada ayna ka feejignaayeen in dagaal kadis ah magaalada lagu soo qaado.
Saraakiisha dowladda waxa ay sheegen in ay dileen ilaa seddex askari oo shabaab ka tirsan oo meydadkooda ay magaalada uga carareen waxaana sidoo kale uu sargaaljaan sheegay in dhankooda laga dilay seddex askari.
Marka laga soo tago sheegashada labada dhinac ma jirto ilo ka madax banaan labada dhinac oo xaqiijinaya qasaaraha ka dhashay dagaalka.
Faah Faahin : Magaalada Qandala oo Hawada Laga Rusheeyay iyo Xaalada oo aad u Xumaatay maxaase hada ka cusub Magaalada???
Madaxweyne Xaaf Oo Khudbad Xasaasi Ah Ka Jeediyay Shirka Iskaashiga Somaliya Oo Ka Socda Muqdisho
Akhriso: Magacyada iyo Beelaha ay ka soo Jeedaan Xildhibaanada Aqalka Hoose ee Gobolada Wuqooyi oo Maanta lagu doortay Muqdisho